Wariye u Dhalatay Dalka Canada oo khiyaamaysay Dagaalyahan Somali British ah oo katirsan Daacish + SAWIRO. |
Wariye u Dhalatay Dalka Canada oo khiyaamaysay Dagaalyahan Somali British ah oo katirsan Daacish + SAWIRO.
Haweeney Saxafiyad ah oo u dhalatay Dalka Canada ayaa khiyaameysay Wiil Somali British ah oo katirsan Dagaalyahanada Daacish, waxaana Muuqaal iyo sawiro ay ka qaaday Wiilkaasi kusoo bandhigtay Warbaahinta Dalka Canada.
Gabadha Saxafiyada ah ayaa Wiilkan Asalkiisu Soomaaliga yahay isaga dhigtay gabadh 15-sano jir ah oo dooneysa in ay ku biirto Daacish, waxaana Gabadha iyo Wiilkan dhax maray sheeko dheer oo u badnaa shukaansi iyo guur.
Saxafiyadda oo u shaqeysa Telefishinka Canada’s Global News network ayaa ciwaano been abuur ah ka sameesatay baraha ay bulshadu kuwada xidhiidhto , waxa ayna sheeko dheer dhax martay Gabadhan Saxafiyada ah iyo Axmed Cantar oo ah Dagaalyahan katirsan Daacish.
Gabadha Saxafiyada ah ayaa ku darsatay Ciwaanka Wiilkan Soomaali Britishka ah oo ahaa Abuu Cantar , waxa ayna Saxafiyad iyada oo xiran Indho Shareer Aalada Skype kala sheekeesan jirtay Wiilkan ka tagay Biritan kuna biiray Daacish.
Sirdoonka Britain ayaa Muuqaalkan markii ay daawadeen kadib waxaa usuurto gashay in ay helaan xogta rasmiga ah ee wiilkaasi ku saabsan iyo Magaciisa , waxaana Wiilkan Magaciisa rasmiga ah lagu sheegay Axmed Cantar .
Wiilkan Soomaaliga ah ayaa ku dhashay Dalka Soomaaliya waxaana dalka Ingiriiska la keenay isaga oo 6-bilood kaliya jira, waxa uuna kusoo bar baaray Galbeedka Magaalada London isaga oo la noolaa Hooyadiisa ,Sadax Wiil iyo Gabar la dhalatay.
Xariirka iyo sheekadii dhax martay Saxafiyadan u dhalatay Dalka Canada iyo Dagaalyahankan katirsan Daacish ayaa laga baahiyay Telefishin kuyaala Dalka Canada, waxa uuna wiilkan inta badan uu gabadhaasi ku qal qaalinayay in ay timaado Dalka Siiriya si ay isku guursadaan.
Axmed Cantar ayaa Gabdha Saxafiyada ah ee isaga dhigtay 15-sano jir dooneysa in ay ku biirto Daacish ka codsaday in uu nikaaxsado kahor inta aysan Siiriya imaan, waxa uuna u sheegay in uu ka baqayo hadii ay Siiriya timaado iyada oo madax banaan in dagaalyahano kale ka guursadaan.
Wargeyska dailymail ee kasoo baxada Dalka Britain oo warbixintan qoray ayaa Sheegay in Axmed Cantar uu kunool yahay Gobolka Raqa ee Dalka Siiriya , waxa uuna katirsan yahay Dagaalyahanada Daacish ee kusugan Dalka Siiriya.
Axmed Cantar ayaa intii uu sheekada la waday Gabadha Saxafiyada ah ee qiyaantay waxa uu u sharaxay sida sahlan ay ku imaan karto Dalka Siiriya, waxa uuna u sheegay in ay Diyaarad soo raacdo ayna ka dagto Dalka Jarmalka kadibna uga soo gudubto Dalka Turkiga halkaasna uu ka kaxeyn doono isaga naftiisa.
Wargeyska Sheekadan qoray ayaa tilmaamay in Wiilkan Soomaali Biritshka ah uu gabadha ka codsaay in ay horey usoo qaadato lacago badan ay ku iibsato hub nolosheeda lagu ilaaliyo, waxa uuna u cadeeyay in muhiim tahay ay dagaalka Jihaadka ka qeyb qaadato ayna isaga la noolaato.
Sheekada Dhax martay Saxafiyada Canada u dhalatay iyo Axmed Cantar ayaa fashil kusoo dhamaatay kadib markii waxii ay kuwada hadleen laga baahiyay Telefishinada , waxaana sheekadan ka turjumeysa qaabka ay dhalinyarada Daacish ku biirta Gabdhaha Yar yar ee Yurub iyo Amerika jooga ugu qal qaaliyaan in ay kasoo tagaan dalkooda ayna ku biiraan Daacish.